ट्रम्पले सार्वजनिक गरे किमले पठाएको ‘उत्कृष्ट’ चिट्ठी ! – Everest Dainik – News from Nepal
ट्रम्पले सार्वजनिक गरे किमले पठाएको ‘उत्कृष्ट’ चिट्ठी !
अमेरिका, असार २९ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उनले लेखेको चिट्ठी सार्वजनिक गरेका छन् । उनले किमले लेखेको चिट्ठी ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । किमले अमेरिकासँगको सम्बन्धबाट नयाँ भविष्यको अपेक्षा व्यक्त गरेको चिट्ठी ट्रम्पले सार्वजनिक गरेका छन् । ट्रम्पले यो चिट्ठीलाई निकै उत्कृष्ट भनेका छन् ।
तर यो चिट्ठीमा उत्तर कोरियाले परमाणु हतियार निशस्त्रिकरणका लागि गरिरहेको वा गर्ने कामका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । गएको महिना अर्थात जुन १२ मा सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक ट्रम्प किम वार्ताको मुख्य मुद्दा नै उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम र त्यसको निशस्त्रिकरण रहेको थियो । उत्तर कोरियामाथि अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको आरोप लगाइरहेका बेला ट्रम्पले चिट्ठी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रतिबन्धका बाबजुद उत्तर कोरियाले विभिन्न देशबाट तेल ल्याउने गरेको आरोप अमेरिकाको छ । गएको डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरियामाथि वर्षको पाँख ब्यारेल तेल मात्रै निर्यात गर्न पाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । किमले पठाएको चिट्ठीको अंग्रेजी अनुवाद गरी ट्रम्पले ट्वीट गरेका हुन् । चार पेजको चिट्ठी ट्वीट गरिएको हो ।
चिट्ठीमा किमले सम्बन्ध सुधारका लागि ट्रम्पले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । यस्तै उनले अमेरिका र उत्तर कोरियाबिचको विश्वासको वातावरण थप बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । दुई देशबिचको सम्बन्ध हुँदै गएको महत्वपूर्ण सुधारले आफूहरुबिचको आउँदो बैठक थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा किमले व्यक्त गरेका छन् । चिट्ठी सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले ठूलो प्रगति भएको उल्लेख गरेका छन् तर त्यसबारे विस्तृतमा केही खुलाइएको छैन । -एजेन्सी
ट्याग्स: donald trump, Kim Jong Il, Kim Jong Una